ဇန္နဝါရီလ 14, 2015 တွင် 1:35 နံနက်
သင့်ရဲ့ hard လုပ်ဘို့နှင့်သင်၏ GREAT Plugin ကိုသူများအတွက်အလွန်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ငါသည်သင်တို့ကိုဒီနယူးအတွက် သာ. ကြီးမြတ်သောကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆန္ဒရှိ 2015 ခုနှစ်!
ရှိသမျှကိုငါအများစုငါနှင့်အတူသဘောတူလိမ့်မယ်ထင်တယ်, မကြာခဏ updates များကိုတွေ့မြင်ချင်ပါတယ်😉
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2015 တွင် 4:36 နံနက်
မှုကြီးကိုစောင့်မျှော်နေ, တစ်! ကျနော် Transposh တွေ့သို့သော်ကျနော်တတ်နိုင်သမျှသင်အားဆက်လက်ထောက်ခံပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း. ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်!
Steen Grønfeldt ကပြောပါတယ်
မတ်လ 6, 2015 တွင် 4:58 ညနေ
ဤသူကားငါသင့် plugin ကိုမြင်ရကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည် – ငါသည်အ jer ပေးရမည်, တော်တော်ပရိယာယ်ဖြစ်ပါသည်! ကျနော်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ဘာသာပြန်တဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ, ဒီမှာကိုယ့်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေပါ၏ – စာမျက်နှာ၏ဒိန်းမတ်ဘာသာပြန်တိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ငါ၏အအလှူငွေပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်!